अनमोल र सारा अलग्गिए, अब ‘हनी बनी’ के हुन्छ ? - Sagarmatha TV Sagarmatha TV
अनमोल र सारा अलग्गिए, अब ‘हनी बनी’ के हुन्छ ?
१८ बैशाख २०७९, आईतवार १४:३५
काठमाडौं – दिवाकर भट्टराईले निर्देशन गर्ने फिल्म ‘हनी बनी’मा अनमोल केसी र सारा श्रीपाइली नरहने भएका छन् । निर्देशक भट्टराईले मुख्य पात्रमा अनुबन्धित भइसकेका दुवैजना कलाकार अब प्रोजेक्टमा नरहने बताएका छन् ।
छायांकनको अन्तिम समयमा अनमोलले प्रोजेक्ट छाड्ने निर्णय गर्नुलाई निर्देशक भट्टराईले केही प्राविधिक कारण जिम्मेवार रहेको बताएका छन् । दुई लिड कलाकारले फिल्म छाडेपछि छायांकन पछि सरेको छ । यो संगै यहि महिनाबाट छायांकन हुने पूर्वनिर्धारित योजना धकेलिएको छ ।
‘ए मेरो हजुर ४’ रिलिजकै क्रममा अनमोलले यो फिल्ममा साइन गरेका थिए, तर छायांकन सुरु हुने बेलामा उनले फिल्म छाडेका हुन् । साराको भिसा नआएपनि निर्माता टिम लण्डनमै रहेकी अभिनेत्री जसिता गुरुङलाई लिएर अघि बढ्ने तयारीमा रहेको बुझिएको छ ।